Sanad ka hor wuxuu ahaa Ilaaliye/Waardiye iminkana waxaa looga yeeray xulka qaranka Ghana…(Aqriso QISO cajiib ah) – Gool FM
(Ghana) 10 Juunyo 2017. Wiil dhalinyaro ah oo ahaa boolis ilaaliya xulka qaranka Ghana ayaa sanad gudihiisa lagu soo daray isla xulka dalkiisa.
Jilaaga qisadan cajiibka ah ayaa lagu magacaabaa Samuel Sarfo.
26 jirka ayaa ahaa ciyaalka xaafada oo u ciyaarayay koox ciyaal xaafadeed ah oo lagu magacaabo Liberty Professionals FC.
Laakiin wuxuu u shaqeynayay sida Boolis Gaanees ah waxaana waajibaadkiisa badanaa ka mid ahaa inuu u shaqeeyo sida Sarkaal dhanka ammaanka ah wuxuuna ilaalin jiray xulka qaranka Ghana.
Yeelkeede, wuxuu iminka ku soo biiray xulkii uu ilaaliyaha u ahaa kaddib markii ay xulka isaga bexeen xiddigihii khibrada lahaa ee Alfred Nelson iyo Daniel Nii Adjei.
Sarfo wuxuu sameeyay sare u kac aan innaba caadi ahayn, sanad kaddib markii uu kulankiisii ugu horreeyay u saftay kooxda ciyaal xaafadeedka ee Liberty waxaa loo magacaabay kabtanka, iminkana waxaas oo dhan waa uu gudbay oo waxaaba looga yeeray xulka Ghana.
Waa daafaca ugu goolasha badan dalkaasi, wuxuu dhaliyay 6 gool waxaana loo saadaalinayay inuu u soo dhaqaaqi doono horyaalka heerka koobaad ee Ghana.
Tababare Kewsi Appiah ayaa la dhacay Sarfo oo ugu yeeray xulkiisa ka hor kulanka ay la dheelanayaan Ethiopia isreeb reebka koobka adduunka.
Sheekada waxaa dhadhan usii yeelaya in Sarfo uu sii wadan doono howshiisa Booliska isagoona matalaya xulka qaranka Ghana.
Dhabar adeegiisa iyo naf hursitiisa ayaa waxa uu ku kasbaday inay booqasho gaar ah ku soo gaaraan xiriirka kubbada cagta Ghana.
“Wax wayn ayay ahayd inaan maqlo aqbaarta in la iiga yeeray xulka, waxaan aaminsanahay in shaqada adag ay miro dhasho tanina waa waqtigii aan galin lahaa howl adag oo dheeri ah,” Sarfo ayaa sidaa u sheegay Joy Sports.
“Ma ahayn wax sahlan, laakiin waxaan ku duceysanaa awood aan ku dagaalanno maxaa yeelay waxaan eeganayaa waxa ka dambeeya xulka la iigaga yeeray.”.
Sarfo ayaa ka qeyb qaatay kulankii dhawaa ee saaxiibtinimo ay 6-1 uga adkaadeen Asokwa Deportivo wuxuuna caawiye ka ahaa gool uu dhaliyay Jordan Ayew ee u safta Swansea City.
W/D: Abdisamed Mohamed Hassan